Indawo yokuhlala yangasese, evulekile nesimanje, ephakathi kwe-Luberon, ugu lwe-Marseille, i-Provence kanye nemikhiqizo yayo. - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yangasese, evulekile nesimanje, ephakathi kwe-Luberon, ugu lwe-Marseille, i-Provence kanye nemikhiqizo yayo.
Pertuis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, i-France
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Bastien
Ngo-258 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Bastien uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Indawo yokuhlala yangasese, evulekile nesimanje, etholakala ezansi kwe-Luberon, imizuzu engu-45 ukusuka ogwini lwe-Marseillaise, maphakathi nobufakazi.
Phumula kule ndawo yokuhlala ethulile futhi enhle, ukulala kuze kufike ezivakashini ezingu-4 (umbhede/umbhede wesofa we-160cm), etholakala phakathi kwe-Luberon, ugu lwe-Marseille, kanye ne-Provence kanye nokuthuthukiswa kwayo.
Uzojabulela indawo yokuhlala ephelele: i-TV, ikhishi (uhhavini, umshini wokuwasha izitsha, ifriji, i-freezer, i-induction cooktop, umshini wekhofi, umshini we-raclette, i-microwave), indlu yokugezela eneshawa engena endlini kanye nekhabethe elikhulu ukuze ugcine zonke izinto zakho.
Ukufinyelela ku-internet kuzokuvumela ukuthi ujabulele ukuzola ukuze usebenze noma uphumule.
Ngokuthenga ukudla noma ukuthenga, indawo yokuthenga yase-Pertuis kanye nemakethe ye-U hypermarket izokukwamukela phakathi nemizuzu engu-5 yendawo yokuhlala. I-Uber eat nayo ikhona futhi ikuvumela ukuthi unikezwe isidlo sakho.
Kungakhathaliseki ukuthi ukhona ngenxa yezizathu zobuchwepheshe noma useholidini, uzojabula ngesimo esiwusizo sendawo yase-Pertuis kanye naleli kamelo :
- Aix en provence : imizuzu engu-20
- Isiteshi se-AIXwagenV: imizuzu engu-30
- Isikhumulo sezindiza i-Marignane: imizuzu
engu-37 - I-Marseille : imizuzu engu-40
- Highway : 5 minutes
- Bonde pool: 8
minutes - Colorado Provencal :
1hr - Calanques: 1hr - Indawo yokubhukuda yomphakathi ye-Pertuis: ukuhamba
ngemizuzu engu-5 Izilwane ezifuywayo azivunyelwe. Akuvunyelwe
I-wifi esheshayo – 258 Mbps
Indawo ethulile nazo zonke izitolo zingakapheli imizuzu engu-10.
Itholakala ngocingo nange-imeyili.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pertuis namaphethelo